Oghere Asgard Deluxe na ewetara ihe puru iche - pisklak.net
Oghere Asgard Deluxe na ewetara ihe puru iche
Otun’ime egwuregwu kachasị egwu Asgard nwere ụdị emelitere na oghere Asgard Deluxe. Ihe odide that a maara nke ọma laghachiri na usoro egwuregwu dum dị na Valhalla. Oghere a na-enye ụfọdụ atụmatụ dị egwu, ebe ihe nkiri vidiyo dị ịtụnanya.
Asgard Deluxe Slot N’ozuzu
Nke a Norse Mythology isiokwu dabeere na oghere nwere 5 esi anwụde na 243 ụzọ niile na-akwụ paylines. E nwere anụ ọhịa abụọ, otu na-amụba ma onye ọzọ bụ akara nnọchi anya. Yggdrasil bụ akara ngosi na 3 ma ọ bụ karịa na-ebute Portal Bonus. Akara ndị awasasịrị ga-akwụ ụgwọ mgbe ha pụtara ebe ọ bụla d e bọọdụ egwuregwu.
Odin, Thor, Loki, d e Freya na-enye gị egwuregwu efu na nhọrọ ịhọrọn’etiti atụmatụ dị iche iche pụrụ iche, dịka ihe nrite atọ atọ, anụ ọhịa na-agbawa agbawa, anụ ọhịa agbawa, t morphing na ndị mmeri na-esote mmeri.
Ọ bụla isi atụ ogho nwekwara ike ịkpalite arbitrary ọhịa reels, mbịne elu 5 esi anwụde Na-amụba Wild!
Dị ka anyị kwurula, oghere a nwere anụ ọhịa abụọ. Plyba ụba anụ ọhịa maka akara ndị ọzọ niile belụsọ Scatters. A na-agbata ihe mgbata n’ọsọ okpukpu abụọ mgbe otu ma ọ bụ karịa n’ime akara ndị ahụ pụtara na mmeri.
N’oge Egwuregwu Egwuregwu Na-enweghị Ihe Njikere Na-agba Ọhịa, Ihe nnọchi nnọchi nke Wild maka akara ndị ọzọ niile ma e wezụga Scatters na Multipling Wild.
N’oge Egwuregwu Egwuregwu Na-eme Njirimara Na-amụba Ugbo, Ihe Mgbanwe Nnọchi Anya Ọhịa maka akara ndị ọzọ niile ma e wezụga Scatters. Agbanyeghị, n’oge Egwuregwu Egwuregwu Na-eme Njirimara Ọhịa, Njikere Nnọchi Mmụba Ọhịa nwere ike ịba ụba ụkpụrụ nke x2, x3, x4, ma ọ bụ x6 ma ọ bụrụ akụkụ nke mmeri.
Random Wild Reels Feature nwere ike ịmalite naanịn’oge Egwuregwu Egwuregwu na ntụgharị ọ bụla. Ihe omume a un – ekpuchi akara 1, 3, 2, 4 ma ọ bụ ihe niile ejiri akara na – eleba anya na Wild Wild tupu akara agba agba ndị ọzọ akwụsị, wee gụọ mmeri. A na-egwu atụmatụ a t nzọ nke na-akpali akpali ma na-enweghị ike ịgbanwe nzọ ahụ. Scatt anaghị apụta n’oge atụmatụ a.
Egwuregwu Egwuregwu efu na-ahọrọ
Mgbe akara 3 ma ọ bụ karịa gbasasịa ga-apụta ebe ọ bụla na ebe egwuregwu ahụ, a na-akpali Free Games Picking Bonus. A ga – agwa gị ka ịhọrọ 1 website wont nhọrọ 4 metụtara egwuregwu egwuregwu efu na – egwu ọnọdụ. Enwere nhọrọ anọ iji họrọ:
Egwuregwu 15 na-enweghị isi na x3 mmeri ọtụtụ 20 Egwuregwu efu na Bursting Wilds 25 Egwuregwu efu na-eme ka Wilds 30 Free Games na Cascading Na-amụba Mmeri
Onye ọ bụlan’ime atụmatụ ndị ahụ nwere iwu a kapịrị ọnụ maka igwu egwu na egwuregwu efu. Mgbe nke ọ bụlan’ime self ndị a na-agbapụtaghachi, a na-agbakwunye egwuregwu ndị ọzọ na-enweghị ihe ọ bụla na Free Games ugbu a. Agbanyeghị, nke kachasị mkpa bụ na ọ nwere ike ịbawanye ohere gị iji merie nnukwu ego. Yabụ, bido ịmalite ịtụ ogwe na Asgard Deluxe oghere miniature bụrụ onye mmeri!